Brno တက္ကသိုလ်ဆေးရုံလေ့လာမှု (ချက်သမ္မတနိုင်ငံ) နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက် - "အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုသတ်ဖြတ်သူအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ" (၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်အပြာ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော2ဆောင်းပါးများကိုရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်အတွက်အလွန်တိုတောင်းသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်, လေ့လာမှုရှိခဲ့သည်ဟု။ (1-30: လွှတ်ပေးရန်အတွက်ချိတ်ဆက်အဆိုပါရေဒီယို segment ကိုမိနစ်2မှာတူညီတဲ့အရာကပြောပါတယ်။ 00) Next ကိုပုဖြစ်ပါသည် အပြည့်အဝသတင်းထုတ်ပြန်ချက် English သို့တစ်လှိုင်းထနေသော Google ကဘာသာပြန်ချက်အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
ညစ်ညမ်း ပို. ပို. ထိခိုက်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေး Brno လေ့လာမှု (ဇွန်လ 4, 2018) ကပြောပါတယ်
ဒါဟာအစတည်ငြိမ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ယောက်ျားနီးပါးအဖြစ်မကြာခဏ 43 ရာခိုင်နှုန်း 53 ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာအချိုးနှင့်အတူလိင်အဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှုနျးဖွယ်ရှိခဲ့တဲ့စာရင်းဇယားအတူတက်ရောက်လေ၏။
တစ်ဦးဆက်ဆံရေး Killer အဖြစ်ညစ်ညမ်း?
လက်တွေ့တွင်လိင်မှုကိစ္စပြdisနာများ (မကြာခဏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခြင်း) ရှိအမျိုးသားများသည်အင်တာနက်မှတဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်ပိုများသည်။ သို့သော်တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်မူသူတို့တွင်အခြေခံကျသောပြproblemsနာများရှိနေသည်။ ဤရွေ့ကား၎င်းတို့၏ခေါ်ဆောင်သွားအလိုဆန္ဒ, စိုက်ထူခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ဆက်စပ်။ ဆီးကြိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လေ့လာမှုသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်အမြဲတမ်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသောအချိန်တွင်မိတ်ဖက်လိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းသည်မျှတမှုရှိသည် (53% နှင့် 45%) ။
Brno ရှိဌာနဆေးရုံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဌာန၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ရလဒ်အဖြစ်သာမန်လိင်ဘဝကိုမရရှိနိုင်သည့်၊ သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်းမပြုနိုင်သောလူငယ်များကိုမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ “ ဥပမာ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ pornoherka လိုမျိုးပြုမူမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတုန်းပဲ” ဟုလိင်ဗေဒဌာန FN Brno MUDr မှရှင်းပြသည်။ Petra Sejbalová။ ထိုသို့သောလူနာများသည်ကုထုံးနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်။
အထူးသဖြင့်၊ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီးကျောင်း၌ဖြစ်စေ၊ မိသားစုတွင်ဖြစ်စေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးတွင်ပညာရေးမရှိခြင်း။ မြီးကောင်ပေါက်များသည်သန္ဓေတားခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံဗဟုသုတမရှိကြသော်လည်းလူငယ်များသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ (တစ်ခါတစ်ရံမူကြိုကျောင်းများ) ရှိကြသည်၊ ယင်းကသူတို့ကိုလိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်စစ်မှန်သောဘ ၀ နှင့်သင့်လျော်သည်ဟုအထင်လွဲမှားစေသည်။ ၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများနှင့်အမှန်တရားကိုပုံပျက်စေသောအယူအဆများ (တရားရုံး၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၌စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း) ကိုမကြာခဏမိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါစေသည် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လိင်မနှစ်မြို့ဖွယ်နီးပါးဖြစ်သောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအား“ စူပါစတာများ” တင်ပြသော်လည်းလက်တွေ့တွင်မူမမှန်ပါ။ “ အများအားဖြင့်အုပ်စုလိုက်လိင်ကိစ္စမှအရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပေမယ့်မသိသူ၊ ရာသီလာခြင်းသံသရာဆိုတာဘာလဲ၊ သန္ဓေတားဆေးအမျိုးအစားကိုမသိတဲ့ကောင်လေးတွေပါ။ ဒီကိစ္စမှာကြီးမားတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ လက်တွေ့တွင်မသင့်လျော်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်ရွယ်တူချင်းများနှင့်ရွယ်တူချင်းများသာမကဆရာများနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်ပါတိုးပွားလာနေသည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောသို့မဟုတ်အခြားပြproblemနာရှိသောအပြုအမူသည်မကြာခဏအင်တာနက်မှတဆင့်ဆက်စ်တင်ကဲ့သို့သောလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းအရာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည့် sexting ကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်တွဲဖက်ဆက်ဆံမှုများမှတဆင့်ရရှိသည်။ သို့သော်လက်တွဲဖော်တစ် ဦး သည်လက်စားချေခြင်းမှအနားယူပြီးနောက်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ပေးလိမ့်မည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောသို့မဟုတ်အခြားပြproblemနာရှိသောအပြုအမူသည်မကြာခဏအင်တာနက်မှတဆင့်ဆက်စ်တင်ကဲ့သို့သောလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းအရာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည့် sexting ကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်တွဲဖက်ဆက်ဆံမှုများမှတဆင့်ရရှိသည်။ သို့သော်လက်တွဲဖော်တစ် ဦး သည်လက်စားချေခြင်းမှအနားယူပြီးနောက်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ပေးလိမ့်မည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောသို့မဟုတ်အခြားပြproblemနာရှိသောအပြုအမူသည်မကြာခဏအင်တာနက်မှတဆင့်ဆက်စ်တင်ကဲ့သို့သောလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းအရာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည့် sexting ကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်တွဲဖက်ဆက်ဆံမှုများမှတဆင့်ရရှိသည်။ သို့သော်လက်တွဲဖော်တစ် ဦး သည်လက်စားချေခြင်းမှအနားယူပြီးနောက်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ပေးလိမ့်မည်။
Tel ။ + 420 532 232 193